Fiaraha-miasa : Hampianarina teny frantsay ireo zaza mianatra rugby -
AccueilSongandinaFiaraha-miasa : Hampianarina teny frantsay ireo zaza mianatra rugby
Fiaraha-miasa : Hampianarina teny frantsay ireo zaza mianatra rugby
Taranja be mpankafy. Fikambanana iray miahy ireo ankizy mpankafy sy mianatra ny taranja rugby ny enfants de l’Ovale. Tontosa omaly teny amin’ny masoivohon’ny alliance française teny Sabotsy Namehana omaly ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa eo amin’io fikambanana io sy ny Alliance française. Votoatin’ny fifanarahana ny fampianarana teny frantsay ireo zaza ao anatin’ny fikambanana. Anisan’ny andraikitry ny alliance française rahateo ny fanohanana ny vahoaka malagasy amin’ny fiainana andavanandro. Samy naneho ny maha-zava-dehibe ny fahaizan’ny ankizy ny teny vahiny ireo rehetra nandray anjara fitenenana tamin’io lanonana fanaovan-tsonia io. Anisan’izany ny filohan’ny fikambanana Enfants de l’Ovale, Lina Randriamifidimanana, filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Alliance française Henri Razafintsalama ary ny masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara, Véronique Vouland-Aneini. Nanotrona izany lanonana izany ihany koa ny solontenan’ny Delege Jeneralin’ny Fondation alliance Française, Emmanuelle Lehembre.
Anisan’ny paikady amin’ny fampirisihina ny ankizy sy ny tanora malagasy hianatra ny teny vahiny, indrindra ny teny Frantsay ny fanokafana ity masoivohon’ny alliance française etsy sabotsy Namehana ity.